ODUU: Haala simannaa fi naa’uumsa guyyaa sirna simannaa hoggansa ABO fi -WBO ilaalchisee | Kichuu
Posted on September 12, 2018 by kichuu_admin
ODUU: Haala simannaa fi naa’uumsa guyyaa sirna simannaa hoggansa ABO fi -WBO ilaalchisee miseensi Shanee gumii- gumii sabaa ABO fi dubbii himaan dhaabaa J/Toleeraa Adabaa fi hoggansi koree simannaa midiyaalee biyya keessaaf bsa laataniiru.
Ibsa miidiyaalee biyya keessaaf har’a Fulbaana 12/09/2018 laatan Kanaan sirni simannaa hoggansa ABO fi/WBO Fulbaana 5 bara 2011 finfinneetti kan gaggeeffamu yoo ta’u; sirni simannaa kun haalaan hoo’aa fi miidhagaa ta’ee, karaa naa’uumsaa fi guddina uummata Oromoo argisiisuun xumuramuuf uummanni keenya addatti qeerroon Finfinnee fi naannawa Finfinnee qooda olaanaa qabu jedhaniiru.
Tuttuqqaa xixiqqaa namoonni muraasni Oromoo fi dhaaba isaa hin jaalannee gaggeessan tokko tokko tuffachuun bira tarkaanfachuun galma keenya isa guddaa gootonni hedduuun irratti wareegaman bilisummaa keenyaaf harka walqabannee haa hojjennu, jedhaniiru.
Walumaa galatti calqabaa amma xumuraatti gama mootummaatiinis humni nagaa eegsisu gahaan waan qophaawee fi ramadamee jiruuf rakkoon nageenyaa tokkooleen waan hin jirreef uummanni keenya naa’uumsaa fi karaa miidhagaa ta’een bahee hoggansa isaa gammachuu fi kabajaan simachuu danda’a, gootota isaa wareegama qaqqaalii kaffalanii guyyaa kana fidan yaadachuu damda’a jechuun ibsa gaazexaa kana guduunfaniiru.
ONN:Seenaa Odaa Suleeymaan Laalchisee Gaaffi fi deebi’ii Aaddee Ilillii Ahmed waliin goone hordofaa.Fuulbana 12/2018
Simannaa ABO’f gara Finfinneetti lafoo Salaalee irraa ka’anii dhufuuf Qeerroon imala eegalan amma magaalaa Fiichee gahuu isaanii gabaasan.
ONN: Fulbaana, 12,2018-Finfinnee(Shaggar) Finfinnee naannoo Magganaanyaa galgala kana
Shinoyyee – New Ethiopian Oromo Music 2018 (Official Video)
Finfinnee qee’ee oro!
Qeerroo akkam namatti toltuu
Duraan ALAABAA TOKKO TOKKOO QOFA qabannee #FINFINNEE teenya irratti gulufna jennee turre.
Dubbiin hardha dhufte immoo waan dandeenyu hunda irratti #FAAJJII_QABSOO keenyaan faayamnee argamuuf diinnii nu kakaasee jira.